Awoodda Waxsoosaarka-Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd
Glass tubbo Patio kululeeyaha
Kartida wax soo saar
Hoyga>Nagu saabsan>Awoodda alaabta
Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd., waa shirkad saamiyadeed oo la aasaasay 2004. Abutting to Ningbo Airport and Ningbo port deport, waxay siisaa raaxo weyn isku socodka iyo gadiidka labadaba. Iyada oo leh dhul dabaq ah oo qiyaastii ah 47, 000 sq Mitir iyo dhul dhisme ah oo ah 40, 000 sq Mitir, warshaddeena ayaa leh inka badan 100 shaqaale (in ka badan 10 farsamoyaqaanno) iyo in kabadan 400 mashiinno kala duwan.
Waxaa hore loo magacaabay Ningbo Hengda Metal Products Co., Ltd., oo la asaasay 1984, Innopower Hengda wuxuu noqday soo saare hogaamiya aaladaha kala duwan ee kuleylka iyo qalabka karinta, oo ay ku jiraan kuleyliyaasha gaaska, kariyaha gaaska lagu dubto, gaaska ku shaqeeya gudaha iyo banaanka, kuleylka gaaska (gaas) meelaha dabka lagu shito), foornooyinka gaaska, gubashada gaaska, xirmada cuntada karinta (xirmada turkey), gogosha, wargeysyada iwm.
Shirkaddu waa kormeerka warshadaha ee ISO9001 iyo BSCI. Badeecadaheena badankood waxaa ansaxiyay CE, AGA, CSA, shahaadooyinka SANS. Iyaga oo ay ku qanacsan yihiin qiimo sare iyo tartan tartan, waxaan go aansanay xirfad aan kala go 'lahayn iyo adeeg macaamiisheenna gudaha iyo dibedda.
Wax soo saar tayo sare leh heer ahaan
Fure u ah soosaarkayaga guuleysta ee alaabada tayada leh waxay kujirtaa geedi socodka wax soo saarka farshaxanka iyo tas-hiilaadka sidoo kale shaqaale khibrad leh.
400 + mashiinno kala duwan oo ay ku jiraan 2sets mashiinno goynta laser
Awoodda wax soo saarka
30,000+ kuleyliyaha & BBQs / Bisha
Khibradda 25sano Aqbal OEM, ODM alaabooyin cusub
Sooyaal dhaqso cusub oo muunad ah
CE, CSA, AGA, SANS, LFGB, DGCCRF
Qalabka shaqada ee CNC & Mashiinka goynta Laser
Mashiinka Wax-ka-qabashada ee Joogtada ah 2
Seminaar ka Saarista Guryaha
Ugaarsiga Badeecadaha Wax soo Saarka
Tijaabada Gubashada iyo Khadka Golaha
Sanadkii 1984, Mr. Yang wuxuu ka bilaabay meheradda qaybo ka mid ah iskutallaabta isku dhex yaaca ee qoyskiisa ku nool tuulada Dongyang, oo wadarta guud 10 qof.
Sanadahaas, ganacsiga shirkaduhu si isdaba joog ah ayuu u koray.
Sanadkii 2000, Ningbo Hengda Metal Products Co., Ltd waxaa la aasaasay. Si loo haboonaado gaadiid, warshadda waxaa loo wareejiyay jidka cusub ee tuulada Dongyang, marka laga reebo wadooyinka gobolka ee S34, oo ay gaarayaan 80 shaqaale.
Isla sanadkaas, ugu dambayntiina, Ningbo Hengda waxay dhammeysay cilmi-baaristii iyo horumarkii kuleyliyaha bannaanka ugu horreeyay waxayna ku dhaqaaqday warshadaha cusub ee qalabka gaaska.
Iyada oo si dhakhso leh u kordheysa koritaanka, sanadkii 2004, Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd waxaa loo aasaasay shirkad wadaag ah.
Isla sanadkaas, oggolaanshaha koowaad ee CE iyo oggolaanshaha AGA ayaa la helay.
Sannadkii 2008, markii ugu horreysay, ayaa Ningbo Innopower la aqoonsan yahay ISO9001.
Sanadkii 2015, warshadda waxaa laga ansaxiyay BSCI.
Ilaa hada, waxaan iibineynaa in ka badan 86 waddan oo adduunka ah waxaana leenahay 35 macmiil oo durbaba nagala shaqeynayey wax ka badan 15 sano.
Address: Aagga Wershadaha ee Dongyang, Magaalada Shiqi, Degmada Haishu, Ningbo, Zhejiang, Shiinaha